Moovly: Naqshadeynta Cajalado Muuqaallo ah, Xayeysiis Banner ama Infographics | Martech Zone
Naqshadeeyahayagu wuu ku adkaaday shaqada, dhowaan wuxuu soo saaray an fiidiyow ah oo firfircoon oo loogu talagalay Xuquuqda Interactive. Marka laga reebo kakanaanta animation-ka, sameynta fiidiyowyada qaar waxay qaadataa saacado iyadoo la adeegsanayo aaladaha desktop-ka caadiga ah. Moovly (waqtigan xaadirka ah beta) waxay rajeyneysaa inay taas bedesho, iyadoo siineysa barxad u oggolaaneysa qof walba inuu si fudud u abuuri karo fiidiyoowyo xayeysiis ah, xayeysiisyo banner ah, bandhigyo is-dhexgal ah iyo waxyaabo kale oo qasab ah.
Moovly waa aalad fudud oo internetka ah oo kuu oggolaanaysa inaad abuurto waxyaabo animated ah adigoon noqon khabiir warbaahin badan. Abuuritaanka nuxurka warbaahinta hodanka ah ayaa hadda u fudud sida loo abuuro bogagga PowerPoint. Moovly way fududahay in la isticmaalo waxayna ka dhigaysaa qof walba inuu u ekaado mid ka mid ah pro-yada.
Tusaalooyinka isticmaalka ka Moovly goobta:
Fiidiyoyaal Animeed - U adeegso Moovly si aad u abuurto fiidiyoow shirkadeed, soo-bandhig wax soo saar, cashar soo jiidasho leh ama sida loo daawado fiidiyow qaab fudud oo toosan. Kudar cod, dhawaq iyo muusig isla markaana iswaafaji wax walba adoo adeegsanaya waqtiga isku xidhka waqtiga fudud. Ku faafi fiidiyowgaaga Youtube, Facebook, ku dheji websaydhkaaga ama u soo dejiso adeegsiga qad la'aanta.
Bandhigyada 3.0 - Iska ilow isqorista. Diirad saar mawduucaaga oo ku dar muuqaalada taxane soo jiidasho leh oo ay taageerayaan ku-meel-gaadhyo soo jiidasho leh iyo animations oo haya dareenka dhagaystayaashaada. Ku taageer bandhigyadaada qaab gebi ahaanba cusub laakiin fudud. Si fudud ugu beddel bandhiggaaga fiidiyoow iyo taa lidkeed.
Muujinta Xayeysiinta - Ku soo jiito feejignaanta dhaqdhaqaaq: samee banner kuu gaar ah, daaraha dhaadheer ama xayeysiisyo kale oo xayeysiis ah oo loogu talagalay adiga ama degellada kale. U naqshadee dallacsiinno xamaasad leh, ogeysiisyo ama fariimo kale shaashad kasta: telefishanka, cidhiidhinta, taleefannada casriga ah, kiniiniga, up Nuqul ka samee hal nooc si aad u sameyso kala duwanaansho badan oo aad jeceshahay, xitaa cabbirka kale.
Is-dhexgalka Macluumaadka - Ku taageer sheekadaada muuqaalka muuqaalka ee macluumaadka, isbeddellada, tirakoobka ama xog kale. Adeegso jaantusyo, khariidado, sawirro iyo muuqaallo kale oo midab leh si aad u soo bandhigto fikradahaaga, cilmi baarista ama warbixinnada. Samee macluumaadkaaga is-dhexgalka: u oggolow dhagaystayaashaada inay ogaadaan macluumaad dheeri ah iyagoo adeegsanaya falalka jiirka-ka-riixa ama guji-dhex-dhexaadinta, pop-up iyo is-dhexgalka kale.
Kaabayaasha Fiidiyowga - Isticmaal Moovly si aad u sameysato fiidiyowyo muusiko kuu gaar ah. Soo rar muusig mp3 ah, ku dar sawirro, muusig, animations ama xitaa jajabka fiidiyowga. Isku xir animation-kaaga garaac oo u dhoofi abuurkaaga si aad ula wadaagto asxaabtaada.
Kaararka elektarooniga ah - Naqshadeyso kaararkaaga elektaroonigga ah ama casuumaadaha internetka munaasabad kasta. Ka yaabso asxaabtaada iyo qoyskaaga fariin asal ah ama ogeysiis Isku dar sawiro, animation iyo qoraal ku qasbaya casuumaad ama rabitaan toos ah. Ku-daabac hal-abuurkaaga Facebook, Youtube ama… on Moovly!
Tags: sawir muuqaal ahfiidiyo muuqaal lehanimationmadal animationisdhexgal infographicmoovly
Tilmaamayaasha Suuqgeynta ee Xayeysiimaha Isweydaarsiga Facebook
Wow, waxaan doonayaa inaan tan hubiyo.